एक वर्षमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार | आर्थिक अभियान
एक वर्षमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार
आईपीओ पश्चात लगानीकर्ताहरुलाई १९% लाभांश
माघ १, काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गत पुस मसान्तदेखि यो पुस मसान्तसम्ममा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर खरीद विक्री भएको छ ।
नेप्सेले दिएको तथ्याङ्क अनुसार यो एक वर्षमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रू. ४९ अर्ब ८ हरोड ८१ लाख ९२ हजार बराबरको ३ करोड ८ लाख ८ हजार ७८१ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । यस वर्ष सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको कम्पनीको शेयरमूल्य यसबिच न्यूनतम रू. १ हजार १०५ दशमलव १० सम्म झरेको थियो ।
पछिल्लो कारोबार दिन कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य रू. १ हजार २७७ कायम भएको छ । यो बिचमा कम्पनीको १६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयरमा मूल्य समायोजन समेत भएको छ । नेप्सेले पुस १४ गते बोनस शेयर प्रयोजनका लागि मूल्य समायोजन गरी प्रतिकित्ता रू. १ हजार १०४ दशमलव ७२ मूल्य तोकेको थियो ।
पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीको रुपमा नेपालमा भित्रिएको यस कम्पनीले २०७६ साल चैत ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म आईपीओ जारी गरेको थियो । धितोपत्र दोस्रो बजारमा सोही वर्षको जेठ २८ गतेदेखि कम्पनीको शेयर कारोबार शुरु भएको हो ।
पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने योजना बनाएको कम्पनीलाई बीमा समितिले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । आईपीओ जारी गरेको दोस्रो वर्षको मुनाफाबाट भने कम्पनीले कुल १९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।
कम्पनीको पुस २२ गते सम्पन्न छैठौ वार्षिक साधारण सभाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को प्रिमियम वाहेक वितरणयोग्य मुनाफाबाट १६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर समेत २ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
कम्पनीले बीमा समितिको निर्देशन बमोजिम लाभांश प्रस्ताव पारितमार्जन गरेको हो । यस अघि कम्पनीले १६ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजन समेत ३ दशमलव ५० प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । परिमार्जन पछि कम्पनीको लाभांशमा नगद लाभांश मात्र १ प्रतिशत कम भएको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब रहेको छ ।
सोही पूँजीको आधारमा कम्पनीले लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले पुस १४ गते एक दिन बुक क्लोज गरेको थियो । बुक क्लोजको आधारमा पुस १३ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरु मात्र कम्पनीको लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।